Cosmic, nharaunda nyowani iyo System76 inogadzirira iyo Pop! _OS | Linux Vakapindwa muropa
System76 inogadzirira cosmic, nharaunda nyowani yePop yayo! _OS
MuLinux pane zvakawanda zvokusarudza kubva. Kune masisitimu ane madhesiki akasimba uye anozivikanwa uye mafilosofi, kune vamwe vane nharaunda zvishoma zvishoma kusagadzikana asi zvakanyanya kushanda kana kunyangwe zvimwe yakagadzirirwa touchscreens iyo inogona zvakare kushandiswa pakombuta. Kune mamwe zvakare akavakirwa pane vamwe uye anosanganisira avo pachavo maitiro, sezvazviri neSystem76 Pop! _OS iri kushanda mune nyowani graphical nharaunda iyo yavakatumidza se Cosmic.
Pop! _OS yakavakirwa paGNOME, asi System76 inoipa yakanyanya kubata. Iko kubata kuchazove kwakatonyanya kukosha gore rino, apo kambani inotanga iyo nyowani graphical nharaunda mairi kushanda. Cosmic inoita kunge inotora mashandiro kubva kuGNOME 40, asi, semuenzaniso, pane maonero maviri akapatsanurwa enzvimbo dzekushandira uye zvinoshandiswa. Kune rimwe divi, kutanga neshanduro inotevera yeanoshanda system pachave nechiteshi pazasi.
Cosmic ndiyo mhinduro kumhinduro kubva kuvashandisi vayo
Tiri kuendesa yakanatswa desktop mushandisi ruzivo muPop! _OS kuburikidza neyedu GNOME-based desktop nharaunda: COSMIC. Iyo mhinduro yakanatswa inoita kuti desktop ive nyore kushandisa, asi iine simba uye inoshanda kune vashandisi vedu kuburikidza nemaitiro Iwo matsva magadzirirwo anogadzirwa kubva mukuwandisa kuyedzwa uye mushandisi mhinduro kubva pakatangwa iyo Pop! _OS 20.04, uye ivo parizvino vari kunatsiridzwa muchikamu chavo chekuyedza.
System76 dhaiza izvo zvakawanda zvezvinosanganisirwa muCosmic zvakaunzwa nemhinduro yemushandisi. Default, iyo META kiyi (Windows) inogonesa iyo kuvhura, kubva kwaunogona kuvhura kana kushandura pakati pezvishandiso, ita mirairo kana kuverenga. Aya maitiro anogona kushandurwa kuvhura nzvimbo dzebasa kana iwo maonero ekuona.
Cosmic ichauya muna Chikumi naPop! _OS 21.04, system ichave yakavakirwa paUbuntu 21.04 Hirsute Hippo. Nguva pfupi yapfuura, System76 ichaisa chaiwo mavhidhiyo edesktop uye gare gare inobvumira vashandisi kuyedza iyo inoshanda sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » System76 inogadzirira cosmic, nharaunda nyowani yePop yayo! _OS
ScummVM: chirongwa chekumhanya nhabvu mitambo inoenderana neSUMUM
Vashandisi, zviitiko uye mabasa muMautic. Iyo chikuva chekushambadzira